ပဉ္စလက်ကကြိုးနဲ့ မှော်ရောင်ဆိုးထားတဲ့ ကဗျာ | ကိုသင်ကာ . . . . Ko Thinker
ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်၏ မြန်မာစကား ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ မှတ်ချက် →
February 18, 2008 · 7:36 am
ပဉ္စလက်ကကြိုးနဲ့ မှော်ရောင်ဆိုးထားတဲ့ ကဗျာ
လေးနက်မှုတွေနဲ့အတူ အေးဆေးမှုတွေလည်း ရောစွက်ထားပါရဲ့….
ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အနမ်းတစ်ခုတော့ သိမ်းခဲ့မယ်…
အောင်မြင်မှုတွေကို မင်းခြွေယူဖို့ ထားခဲ့တယ်…
ခိုင်မာနေတဲ့ စိတ်တစ်စုံလည်း အတူရပ်နေရမယ်…
All Together on A Planet ပေါ့…
လုလုပြီး နင်နဲ့စားခဲ့တဲ့ မုန့်အရသာ
Trash ထဲ ထည့်ပစ်ဖို့ မဟုတ်ဘူး
လှိုင်စေ လွှမ်းစေ သာယာစေ…
ရေခဲပြင်မှာ အေးစက်မှုတွေ ပွေ့ဖက်နေသလား
ချိုမြိန်တဲ့ အချိန်တွေ အတိတ်မှာ မကျန်ရစ်ဘူး
ဂျစ်တစ်တစ်နဲ့ လောကကို ခါးစောင်းတင်ချင်
တူးတူးခါးခါးတွေနဲ့ အတိတ်က မချိုခဲ့ပဲလေ…
ညလေးရဲ့ ဆိတ်ငြိမ်မှုမှာ အသက်ဝင်ဖူးတဲ့
ဒိုင်ယာရီဆိုပေမယ့် စကားလုံးတွေနဲ့တော့ မဟုတ်ဘူး…
ထက်မြက်တဲ့ ချစ်ခြင်းနဲ့ တွဲလျက်ပါကွယ်..
ယွန်းသွားတဲ့ နေ့ရက်တွေကို ပြန်ဆယ်တဲ့အခါ
ခညောင်းတဲ့ မင်္ဂလာတွေနဲ့လည်း တချိန်လုံးမပြည့်ခဲ့ဘူး
Let it Be နေပါစေတော့….
မင်းမူနေတဲ့ အနုတ်လက္ခာဏာ တွန်းကန်အားတွေကို
အေးဆေးတဲ့ ခံနိုင်ရည်တွေနဲ့ ကျော်ဖြတ်ခဲ့တယ်…
ရန်လိုခြင်းတွေ ကင်းတဲ့ ကမ္ဘာမို့
Virtual World လေးပဲ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရစေဦးတော့
နယ်ခြားရဲ့ စည်းတစ်ဖက်ကို မလွန်မြောက်ခဲ့သူပါ…
စင်ကြယ်တဲ့ ဖြစ်တည်မှုအနေနဲ့ ရှိပါရစေ…
`တ´ စေ တဲ့ အနမ်းတွေနဲ့ အမိန့်ပေးခဲ့ပြီပဲ…
၀င်္က န္တဥာဏ်တွေနဲ့ စီမံတဲ့
သင်ဟာ ဒီစကားလုံးတွေကို ပယ်ဖျက်ခွင့်ရှိပါတယ်
ကာရန်အဖွဲ့တွေကို ခါးသက်တယ်လို့များ ထင်ရင်ပေါ့…
လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲ စကားလုံးတွေ ချပစ်ခဲ့ပါ
(07: 05 pm, 18 Feb, 2008)
Tagged as Blogging, Poem
0 responses to “ပဉ္စလက်ကကြိုးနဲ့ မှော်ရောင်ဆိုးထားတဲ့ ကဗျာ”
ကိုသင်ကာရေးတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းကဗျာတွေ လာဖတ်သွားတယ်ဗျို့။
ကောင်းပါတယ် ခင်ဗျာ … 😀
ကဗျာ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ။ စိတ်ကူးဆန်းလှချည်လားဗျ။ ကဗျာတွေ ရေးပါဦးဗျာ။
“ဟား ဟား ဟား“ ဟု သုံးကြိမ် သုံးခါ ရယ်သွမ်းသွားသည်။
အားပါး ရေလည်လန်းတယ် ကိုဘုန်းကတော့မိုက်တယ်
သင်၏ အတွေးတွေကို ရှင်းလိုက်စမ်းပါ။
ကာနေတဲ့ ဒီ မြက်ရိုင်းတောတဆုံး
နေခြစ်ခြစ်တောက်ပူနေတဲ့ လွင်ပြင် တခုရှိတယ်။
ကောင်းမွန်သော လမ်းတခုတော့ ဟုတ်မယ်မထင်။
လားပေါင်းများစွာနဲ့ ငါတို့ ခရီးဆက်ဖို့ပဲ ရှိတော့တယ်။
ကျနော်က နာမည်ပဲ ပြည့်စုံတာလေ.. ..
မနက်ဖြန်တိုင်းမှာ နံနက်ခင်းလေးလို လှပနိုင်ပါစေဗျာ..
စေတဖန် သက်တဆုံး ဂုဏ်ယူနေမယ်တဲ့။
ပင့်ဂိုလ်းရောင် အတိတ်တွေ ဆိုတာ ဘယ်လိုများ ပါလိမ့်
ကိုကျော်ဇေယျ လည်း ရေးလို့ ဟိုနေ့ကပဲ သွားဖတ်ပြီးပြီ
ဟော ခု ကိုသင်ကာ ရေးပြန်ပြီ
ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ အိုင်ဒီယာမျိုးပဲဗျ။ အရမ်းအရမ်းကို လေးစားပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း အချိန်ရရင် တစ်ပုဒ်ရေးမယ်ဗျာ။
ရေးတတ်တယ်။ တော်တယ် ကိုthinker ရေ။ စုံသွားတာပဲ။
ကိုသင်ကာ .. ရေးထားတာ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ.. ရေးလည်းရေးတတ် အတွေးလည်းစုံတော့ အကုန်ပါသွားအောင်ကိုရေးတတ်တာပဲဗျ… အဆင်ပြေပါစေဗျာ..
ကို သင်ကာရေ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။။ကျေးဇူးဗျာ ..နက်မကောင်းတာရယ်။စီဘောက်က
ဘာတွေ အယ်ရာနေမှန်းမသိလို့ ကဗျာလေးကို မတွေ့ လိုက်ရဘူး အခုမှ တွေ့ရတယ်
တော်တော်လေး စုံနေတာပဲနော် ..ကိုသင်ကာ အဆင်ပြောပါစေ .ပျော်ရွှင်ပါစေ